Kirin 990 ga - enwe 5G webatara nke ọma | Gam akporosis
Otu izu gara aga ka a mara ọkwa na Kirin 990 na-aga nọ ugbu a na IFA 2019. Ọ bụ ihe Huawei onye nhazi ohuru di elu, nke nwere ike ịbụ ugbu a na Huawei Mate 30 na n'ime akara mpịachi nke ika ahụ, Mate X. Ihe a na-atụ anya tupu onye nhazi a kachasị ma akara ahụ n'onwe ya malitere ịkwalite ya, na-ekpughe nkọwa dị mkpa.
Na Berlin enwerelarị akwụkwọ mmado banyere Kirin 990 nghọta, nke ekpughere otu ihe dị mkpa nke nhazi ahụ, nke a nụworo asịrị maka izu. Ihe nhazi ahụ ga-abịa na 5G na-arụ ọrụ ọnụ. N'ihi ya, ọ ga-abụ mgbawa dị elu na nwa afọ 5G.
Mgbe akụkọ pụtara na kwuru na ika ga-ewepụta ndị nhazi abụọ dị elu n'afọ a, ọ na-eme atụmatụ na otu n'ime ha ga - abịa na 5G nwaafọ. Ugbu a ọ dị ka Kirin 990 bụ onye ahọpụtara n'okwu a. Yabụ na ọnụnọ nke 5G na ya gosipụtara n'ụzọ dị otu a.
Ọ bụ ezie na ugbu a enwebeghị nkọwa ndị ọzọ. Anyị ga-echere maka ngosipụta nke ọrụ ya na Fraịde a ka anyị mara ihe niile gbasara ihe nhazi ọhụrụ a nke akara ndị China. Dị ka ga-enwe njikọta 5G modem, ọ bụ ezie na amabeghị ma ọ ga - abụ Balong 5000 nke anyị marala.
Kirin 990 ga-adị otu a onye nhazi izizi kụrụ ahịa na ịnwe 5G a. Onye mbụ bịarutere, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke mbụ ewebata, ebe ọ bụ na awa ole na ole gara aga Samsung webatara Exynos 980 na ọkwa, na ọ nwere 5G nwa afọ. Mana amaghi mgbe igwe nwere mgbawa a site na akara Korea ga abata.
Kama, ihe niile na-egosi nke ahụ ọ ga-abụ Huawei Mate 30 ndị na-eji Kirin 990. Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, anyị agaghị eche ogologo oge tupu anyị ahụ ha. Ebe ọ bụ na ụbọchị ole na ole gara aga ọ kwadoro na ọkwa a dị elu na-aga ugbu a na Septemba 19. Yabụ n'ime izu abụọ anyị ga-ewepụ obi abụọ ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Kirin 990 ga-abịa na 5G wuru na ala